Chirevo pamusoro peMoabhi chinopfuurira (1-14)
16 Tumirai mutongi wenyika yacho gondohwe,Ribve kuSera, ropfuura nemurenjeRichienda kugomo remwanasikana weZiyoni. 2 Seshiri yadzingwa mudendere rayo,+Ndizvo zvichaita vanasikana veMoabhi pamazambuko eAnoni.+ 3 “Ipa mazano, ita zvakasarudzwa. Ita kuti mumvuri wako uite seusiku pamasikati makuru. Hwandisa vakaparadzirwa uye usatengesa vaya vari kutiza. 4 Vanhu vangu vakaparadzirwa ngavagare mauri, haiwa iwe Moabhi. Iva nzvimbo yekuti vahwande anoparadza.+ Mudzvinyiriri achasvika pamagumo ake,Kuparadza kuchaguma,Uye vaya vanotsika-tsika vamwe vachapera panyika. 5 Chigaro cheumambo chichasimbiswa kwazvo nerudo rusingachinji. Uya achagara pachiri mutende raDhavhidhi achange akatendeka;+Achatonga zvakanaka, achikurumidza kuita zvakarurama.”+ 6 Takanzwa nezvekudada kweMoabhi, iyo inodada chaizvo,+Iko kuzvikudza kwayo nekudada kwayo nekushatirwa kwayo;+Asi hapana chichabuda pakuwawata kwayo. 7 Saka Moabhi ichachema Moabhi;Vese vacharidza mhere.+ Vaya vakarohwa vachachema makeke emazambiringa akaomeswa eKiri-hareseti.+ 8 Nekuti minda yeHeshbhoni+ yaoma,Kana uri muzambiringa weSibma,+Vatongi vemarudzi vatsika-tsika mapazi awo matsvuku-tsvuku;*Iwo akanga asvika kuJazeri;+Akanga atambanuka kusvika kurenje. Nhungirwa dzawo dzakanga dzapararira kusvika kugungwa. 9 Ndokusaka ndichachema muzambiringa weSibma sekuchema kwangu Jazeri. Ndichakunyorovesa nemisodzi yangu, haiwa iwe Heshbhoni neEreyare,+Nekuti kushevedzera pamusoro pemichero yako yezhizha nepamusoro pegoho rako kwapera.* 10 Kupembera nemufaro uye kufara zvabviswa mumunda wemichero,Uye muminda yemizambiringa hamusi kushevedzerwa kana kuimbwa nziyo dzemufaro.+ Uya anotsika muchisviniro achisvina waini haachaiti basa rake,Nekuti ndaita kuti kushevedzera kupere.+ 11 Ndokusaka ndichidedera nechemukati pamusoro peMoabhi,+Sezvinoita tambo dzerudimbwa,Uye mwoyo wangu pamusoro peKiri-hareseti.+ 12 Kunyange Moabhi paanozvinetesa panzvimbo yakakwirira uye paanoenda kunzvimbo yake tsvene kunonyengetera, haana chaachabura.+ 13 Iri ndiro shoko rakambotaurwa kare naJehovha nezveMoabhi. 14 Zvino zvanzi naJehovha: “Mumakore matatu, semakore emunhu wemaricho,* kukudzwa kunoitwa Moabhi kuchava kunyadziswa nemhaka yenyonganyonga yemarudzi ese, uye vaya vanosara vachava vashomanana, vasina simba.”+
^ Kana kuti “mapazi awo akaremerwa nemazambiringa matsvuku.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Nekuti kushevedzera kukuru kwevarwi kwadzika kuchiuya pamichero yako yezhizha nepagoho rako.”
^ Kana kuti “ayo anoverengwa pachinyatsotevedzerwa zvinoitwa nemunhu wemaricho”; kureva, makore matatu akakwana.